I-China Inwebile I-Metal Fektri nabaphakeli | Dongjie
Insimbi engenwetshiwe luhlobo lwensimbi yeshidi elisikiwe futhi layelulwa ukwenza iphethini ejwayelekile (imvamisa eyenziwe ngomdayimane). Ngenxa yendlela yayo yokukhiqiza, insimbi enwetshiwe ingenye yezinsimbi zomnotho eziqine kakhulu, noma izinto zokugaya emakethe. Insimbi enwetshiwe yenziwa kusuka eshidi eliqinile lensimbi, futhi ayilukiwe noma ifakwe insimbi. Ngakho-ke ngeze kwaphulwa. Izisetshenziswa zensimbi ezinwetshiwe zifaka insimbi yokwakhiwa, insimbi enwetshiwe, i-BBQ yensimbi enwetshiwe, insimbi eyandisiwe ye-Micro kanye ne-mesh yokwakha.
Insimbi eyandisiwe yokwakha isetshenziselwa ikakhulukazi njengomhlobiso wokwakha noma izinto zokwakha, njengunsela wophahla, isisetshenziswa se-facade, isihlukanisi sendawo, ishelufu lamashalofu, i-mesh yefenisha, i-mesh yokwakha njll. Le mikhiqizo yenziwa ikakhulukazi nge-aluminium, insimbi egonjiwe insimbi engagqwali njll. Ijamo lesimbobo livame ukuba lidayimane.
I-3.Filter yensimbi enwetshiwe ngokuvamile isebenzisa insimbi egqinsiwe njengezinto ezingavuthiwe. Vele ngokusho kokufunwa kwamakhasimende, kungasebenzisa insimbi engenacala noma insimbi ye-aluminium.
I-4.BBQ yensimbi enwetshiwe ijwayele ukusebenzisa insimbi egxiviwe njengezinto ezingavuthiwe, ezinenzuzo ye-anti-corrosion, anti-rust and economical.
Insimbi eyandisiwe ye-5.Micro yenziwa ikakhulukazi ngensimbi ye-aluminium yensimbi egqinsiwe nensimbi yethusi. Uma unazo ezinye izidingo, singakwenza kube ngokwezifiso zakho.
I-mesh yensimbi eyandisiwe isetshenziselwa kuphela ukwakhiwa kwezakhiwo zangaphandle nangaphakathi njengokuqinisa usimende, ukuqapha umgwaqo omkhulu, ibhuloho, uthango lwezindawo zezemidlalo, inethi yokuvikela ibhande eliluhlaza okotshani, efana nesikhulumi esisebenzayo, isitebhisi, umgwaqo wokuhamba, umgwaqo wesitimela, imboni ekhanyayo, isakhiwo izinto zokwakha, ingadi, imboni yezimayini, imboni yezolimo, ukuhlanganiswa okuhlanganisiwe, iminyango namafasitela, amakhethini, i-alamu, ukufinyelela okuphuthumayo, ukuphazamiseka kwesitebhisi, amatafula nezihlalo, izindawo zomoya, ibhokisi lokugcina, amashalofu, umsebenzi wezandla.
Ingasetshenziselwa ikhava yesikhulumi se-grille enezikhala, ukufafaza okungamanzi, ukuvikelwa kwemishini, amathoni ayi-10,000, isisetshenziswa sonyawo lukawoyela, imishini esindayo, i-boiler, i-mine mine i-aquaculture, i-appliance yasekhaya njll. Ngokwezinhlelo zakho zokusebenza, singakucebisa ngosayizi ofanele wesikhala esandisiwe sensimbi.
Esedlule: Isihlungi se-Carbon esenziwe